Ha anaghị akụzi ihe a na Klaasị Ahịa | Martech Zone
Ekwetaghị m na ọ bụ ihe nzuzo, mana ekwenyere m na usoro kachasị aga nke ọma na-elegharakarị na ahịa na ahịa bụ uru nke netwọk gị. Ndị mmadụ na-elekwasị anya na nloghachi na ntinye ego, ọnụ ọgụgụ, nyocha, akara, ịmepụta, atụmatụ, arụmọrụ, nrụpụta, wdg ka ha na-arụ ọrụ site na mbọ ahịa ha. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ịkọwaa ihe ndị ahụ niile, ọ nweghị nke ọ bụla nyere gị ụzọ nke ego azụmaahịa gị ga-adị ndụ ma nwee ọganiihu.
Ahịa abụghị ihe na-enweghị ndị na-ege ntị ma ọ bụ obodo. Na mgbọrọgwụ ya, ekwenyere m na ọrụ ahịa na ịre ahịa abụghị ere, ọ bụ ịzụlite ntụkwasị obi n'etiti onye nwere nsogbu ahụ na ihe ị ga-eme. M zutere incredibly otutu ndị mepụtara ịtụnanya ngwaahịa… ma ha kọrọ na netwọk na-ere ha. Na… na-abụghị… M na-ele n'ezie crappy ngwaahịa-eme ka ọ n'ahịa na ọma. Ọ bụghị n'ihi na ọ bụ nnukwu ngwaahịa, mana n'ihi na enwere ndị na-ege ntị na tụkwasịrị obi ụlọ ọrụ na-ere ya.
Onwe m, anaghị m etinye ego dịka m na-etinyebu na ụlọ ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ atụmatụ. Kama, m na-etinye ego na ndị mmadụ. M na-ewepụta oge iji zute ọtụtụ ndị mmadụ, iji nyere ọtụtụ ndị aka, ịkwọ ụgbọala na ire ndị kwesịrị ya, yana itinye oge na ume na ohere ebe enweghị uru ọ bụla baara m. Ihe niile dabere na ntanetị bụ.
E nwere ụfọdụ ndị ọchụnta ego na-aga nke ọma m maara nke gbara netwọk ha ọkụ. Ha mbụ ụlọ ọrụ na-eme ọmarịcha ma, site na ire ahịa dị elu, na-apụ ma na-eme nke ọma. Ma nke ha Osote ụlọ ọrụ dara ewepụghị. N'ihi gịnị? N'ihi na ntụkwasị obi agaala. Nke a bụ ihe kpatara na ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ọgụgụ isi anaghị akwụ ụgwọ dabere na ahụmịhe ma ọ bụ talent, ha na-akwụkarị ụgwọ dabere na netwọkụ ị na-eweta. Neti gi bara uru karie gi ma a bia ahia na ahia. Tinye ego na netwọkụ gị ma ị ga - ahụ na onye ị na-arụrụ ọrụ ma ọ bụ onye ahịa mara gị uru nke ukwuu.
Ekwetaghị m? Lelee azụmaahịa ndị na-eme nke ọma gburugburu gị, lekwasị anya na netwọkụ nke ndị ahịa na ndị na-ere ahịa ha na-arụ ọrụ. Enweta ego sitere na ndi mmadu - obughi site na ngwaahịa, njirimara ma obu logos di nma. Ezie na anyị kwesịrị itinye ego na a ọkachamara persona online, ebumnobi ekwesịghị ịbụ na-ere - ọ kwesịrị iwu a na netwọk ma jupụta ọdịiche dị n'etiti ịzụta mkpebi na ire ere na a akwa nke tụkwasị obi.
Ndị ahịa anyị ejiri kpọrọ ihe bụ ndị anyị na ha nọrọ obere oge ma tụkwasị anyị obi. Ha etinyewo ego dị ukwuu na ọrụ anyị ma anyị achọpụtala na arụmọrụ ha ka anyị ghara ịtụfu ntụkwasị obi ha. N'aka nke ha, ha na-ewetakwara anyị aha anyị kacha mma… ebe ntụkwasị obi adịworị n'ime netwọkụ ha. Tinye ego na netwọkụ gị.
Tags: uru ntanetịịkparịta ụka n'socialntanetnetwọkụ mmekọrịta
Steeti Ekwentị na US